UNxamalala uthi ababulali benyathi balala ubucwayimbana - Bayede News
Isithombe: ngu-Oupa Nkosi
Useyikhombile intuba azophulukundlela ngayo emacaleni anamekwa ngawo uMsholozi
”IZimo zalokhu kushushiswa zikhombisa umumo wezepolitiki omubi nowethusayo futhi nobambezela kungenasidingo, kanye nokuchema okusobala nokubuhlumbuluzi kwezokushushisa. Njengoba ngizokhombisa okuseqhulwini ngokushushiswa kwami kube wumfakela ongafanele kwezokushushisa kanye nokuziphatha kokushushiswa kubandakanya abashushisi abathile.”
Lawa ngamagama aqukethwe esethulweni esingamakhasi angama-286 kanye namaphuzu angama-783 emqulwini oyiCala uCCD30/2018 elisezithebeni zeNkantolo Enkulu. Isethulo senziwe yilowo owayenguMengameli wezwe nowe-African National Congress (ANC), ecaleni elibizwa nge: The State and Jacob Gedleyihlekisa Zuma (ummangalelwa wokuqala) kanye neThint Holdings (South Africa) Pty Ltd (ummangalelwa wesibili). Lona ngumdonsiswano osuthathe cishe iminyaka eli-17 kanti futhi izinkomba zithi isazonezeleka le minyaka uma ubuka ubude nobubanzi bezethulo ezenziwe nguMbuso kanye nabamangalelwa. Kulo mqulu ongamakhasi angama-286 kanye namaphuzu angama-783 uZuma ugeqa amagula ngakubiza ngamatulo okumhlinzela ezibini nathi lokhu kumemuka amalungelo akhe aqoshwe kuMthethosisekelo. Ecaphuna kuMthethosisekelo uZuma uthi:
“Ngiyagcizelela ukuthi nginelungelo lokuhlala unomphelo, noma ngithole ukukhululeka okufanelekile, ngenxa yokuthikamezeka kwelungelo lami lokuthethiswa amacala ngobulungiswa njengoba kubekiwe kule ncwadi efungelwe, ikakhulukazi ngelungelo leSigaba 35 (3) (d) soMthethosisekelo kuhambisana nokuhlinzekwa nguS34A2A kweCertified Public Accountant (CPA).”
Ekuphatheni elamalungelo akuMthethosisekelo zisuka nje kukhomba khona ukuthi uzimisele ukuthi uma limehlula ezinkantolo ezincane agcine eselwethule ezithebeni zeNkantolo YoMthethosisekelo nokusho esinye isikhathi ngoba ukuze afike lapho kuyomele azihambe zonke ezincane kunayo.
Njengosopolitiki osemkantshubovu uZuma uthi konke lokhu okwenziwa kuye kungenxa yepolitiki: “Ukushushiswa kwami kuphathelene nezepolitiki futhi kwagutshezelwa kwavezwa njengenkohlakalo esolwayo esinqumweni seNingizimu Afrika sokuthenga izikhali ezibiza izigidigidi, ngisho kwaziwa ukuthi ngangisondelene nokwakwenziwa,” kusho uZuma.
Uveza nokuthi amacala lawa ‘anamekwa’wona ayenehloso yokumdicilela phansi nokumehlisa isithunzi. Ngaphandle kwaleli lenkohlakalo uthi nabekwa lona lokudlwengula kwabe kuseyilo itulo.
“NgoZibandlela wezi-2005, ngabekwa amacala okudlwengula owesifazane ekhaya lami. Ngiliphika icala, ngathethiswa icala eJohannesburg kwaba yizinyanga eziningi ekuqaleni kowe-2006. Kwaba yizinyanga zokuphoxeka kabi kwami,” kubalisa uZuma.
Esethulweni sakhe umile ekutheni ngobani abambophela amanqina enyathi. Umunwe uwukhomba ezikhulwini zeNational Prosecution Authority (NPA), abameli balolu phiko kanye nabathile kwabezindaba.
Enza isibonelo ngalokhu uMsholozi uthi amacala athinta yena, uMnu uShaik kanye nomufi uSelebi angubufakazi bokubekwa nokuthethwa kwecala kwabezindaba ekubeni udaba nesinqumo singathathwanga yinkantolo. Uthi ukugasela kwabaphenyi ezindlini nasemahhovisi abo kwakwazisa abezindaba kungakenzeki nokwabe kufakazelwa wukuthi babethi befika bebe bekhona abezindaba. Lokhu uthi inhloso kwabe kuwukuphindaphinda isithombe esisodwa emehlweni nasemiqondweni yomphakathi ngenhloso yokumenza umgulukudu nobhongoza wenkohlakalo.
Ukhomba u-Advocate uBulelani Ngcuka njengobhongoza ekushushisweni kwakhe nathi wamphehlela amanzi amnyama ngisho engasasebenzeli iNPA, esebenzisa sampaka uMnu uLeonard McCarthy nathi uZuma wabe echathwa nguye uNgcuka ngaloko okumele akwenze. Ukweseka ubufakazi bokusebenzisana phakathi kwabamshushisayo kanye nabezindaba uZuma uveza ukuthi mhla zingama-24 kuNtulikazi ngowezi-2003, njengoMqondisi Wezokushushisa uNgcuka wenza izinhlelo zokuhlangana nabahleli abathile bamaphephandaba amakhulu kuleli. UZuma uthi uyakholwa ukuthi lokhu kuhlangana kwakungekho mayelana nokwaziswa ngamacala okuyinto eyayibikwe emaphephandabeni, kepha uthi ezithebeni kwabe kuligama lakhe. “Lolu daba kuyakhulunywa ngalo futhi nasesikhalweni sami engasifaka kuMvikeli Womphakathi nasembikweni wakhe. UMnu uVusi Mona, owayenguMhleli weCity Press, ongomunye wabahambela umhlangano wafaka isikhalo kuKhomishini kaMehluleli uHefer kodwa leso sikhalo sangalandelelwa. Kwabe sekucaca ukuthi umhlangano waba khona kodwa abanye abahleli ababeyingxenye yawo base bemanqika ukukhuluma ngokwenzeka,” kwenaba uZuma esethulweni.
Khona lapho uZuma uthi laba abambophela amanqina enyathi bamenqabela ukuba athole amadokodo amqoka nakholwa wukuthi uma ewathola uyokwazi ukuzilungiselela kahle. Omunye wemiqulu akhala ngawo yilowo owaziwa ngele‘Browse Mole’ nathi wathulwa mhla zili-16 kuNhlolanja ngowezi-2009. Lapha uthi yize babephika okwabe kuthiwa bawuhlanganisile kepha ubufakazi busho okunye.
“Kunobufakazi obuyinkindlane obubheke eqinisweni elithi uMcCarthy wajuba abakwaBrowse Mole ukuba baphenye phakathi kweminyaka yowezi-2005 nowezi-2006 ukuze basebenzise ulwazi oluqoqwe abakwaBrowse Mole ekushushisweni kwami,” kusho uZuma nophetha ngokuthi uma enganikezwa lo mbiko kungalula ukuveza ukuxhumana kwepolitiki kanye nokushushiswa kwakhe.
Elinye idokodo alifuna yilelo elithinta uSARS nathi iNPA iwuhlaba inhlali yize esewacele kaningana la madokodo. Amanye amadokokodo athi akasondezwe ukuze azihlele kahle yilawo ombiko kaMvikeli Womphakathi emuva kokukhala kwakhe ngokusebenza kweNPA lapha uthi imibiko yangaphakathi namanothi ayoveza lukhulu ageze igama lakhe. Ufuna namadokodo angemibiko ngokuputshuka kobufakazi obuthinta ukushushiswa kwakhe.
“Sithole ukuthi kwaba nokuputshuka okunohlonze kuNPA. Lokhu kuputshuka akukho emthethweni futhi akunabuqotho. Kufanele kubenophenyo lwangaphakathi kuNPA mayelana nalokhu kuputshuka, futhi kuzosiza ekuqiniseni udaba lwami ngokungahambi kahle ngaphambi kukuthethwa kwecala nangendlela umphakathi obuka ngayo okulokhu kwanginamatha kusukela ngowezi-2003,” kuchaza uZuma.
Obunye ubufakazi uMsholozi athi uyabudinga imininingwane yezimali ephathelene nokukhokhela uNtsukela Khuzwayo (uKhwezi). Kulokhu akafihli ukuthi lokhu ukufunelani: “Yenqaba iNPA ukuphendula isicelo ngemininingwane. Inhloso yalesi sicelo kwabe ukuthola ukuthi ngabe uKhwezi unakho yini ukuxhumana nanoma ngubani kuHulumeni, noma kungaba khona yini ukungenelela kweSigungu, noma inkohliso ngasohlangothini lweNPA. Kuzoba nesidingo soku ukuthi ngabe icala lokudlwengula liyngxenye yini yeqhingasu lokungisusa ekuncintisaneni ngokwepolitiki phakathi kowezi-2005 nowezi-2007, futhi kudingeka kakhulu ukuqhuba nokungenelela ngokwezepoitiki ohlelweni lwezokushushisa.”
UZuma umile kwelokuthi ukwesula kukaMcCarthy kuNPA emuva nje kokuba kube noshintsho kwesobuMengameli we-ANC kwabe kuwukubaleka ngoba zabe zesishile isikhotha abe ecashe kuzo. Kulokhu uZuma uthi: “Ngiyakholwa ukuthi ukwesula kukaMcCartthy ngokushesha kwabangelwa wukuthi yena kanye nabanye ababeseka uMbeki babesaba ukuthi isiGungu esiphezulu se-ANC esabe siqokwe ePolokwane sabe sizohosha uMbeki ekubeni nguMengameli wezwe.” Ngalokhu uZuma wakha isithombe sokuthi konke kwabe kumthinta umbeki noma abathile eduze naye.
Yize kulindeleke ukuthi noMbuso uphikisane nalokhu okushiwo nguZuma okusobala wukuthi kungekudala izogezelana nokuthi ipolitiki, uHulumeni kanye nezokushushisa ngeke zisinde emachaphazelweni njengoba izobe ibhixana nje ingancengani. KuZuma leli cala linguwafawafa ngoba uma limlahla ngeke agcine ngesikweletu sezigidi kepha uzophelelala ezikhindini.
Amaphuzu amahlanu aziphungela ngawo uZuma
OKokuqala ngeneka umlando weqhaza lami kupolitiki yakuleli, okuyiwona onomthelela omkhulu kundlela engishushiswe nganqanyulezwa ngayo.
Okwesibili, wukweneka umlando wakho konke lokhu okwenzekayo, ikakhulukazi uDaba Lwezikhali olusetshenziswe njengesisusa sophenyo nokushushiswa kwami ukuze kusithibezwe ezepolitiki njengesisusa sakho konke lokhu. Ukuze kube lula kuwo wonke umuntu ngibeka izigameko ngokulandelana kwazo selokhu kwaqala uphenyo.
Okwesithathu ngeneka imigomo yomthethosisekelo okufanele iqondise ilawule iNPA kanjalo namaqophelo ayo ezokushushisa. Ngaleyo ndlela, ngiveza isithombe esisobala sokuthi indlela eqhube ngayo iNPA emacaleni engibeke wona yehlulekile ukusebenza ngokuzimela nokusebenzisa umthethosisekelo ngendlela elindelekile uma kuphenywa amacala obugebengu.
Okwesine ngeneka phambi kwenkantolo ukubanjezelwa yiNPA kokuthethwa kwalamacala okuyinto engilimazile siqu sami. Lapho ngikhuluma ngelungelo lami elivikeleke kumthethosisekelo sokulethwa phambi kwenkantolo kuthethwe icala ngaphandle kokubanjezelwa njengoba kuchazwa eSigabeni 35(3)(d) soMthethosisekelo, iSigaba 342A weCPA, nakwezinye izingxenye zomthetho.
Lesi sitatimende esifungelwe siletha phambi kwale nkantolo amaphuzu aqinisekisa ukuthi alikho elinye icala emlandweni wamacala obugebengu elinazo zonke izimpawu zokungabi nabulungiswa njengelokushushiswa kwami ngaphansi kwalezi zimo. Isikhathi eside esesiqhubekile icala lingathethwa nezizathu ezihambisana nalokho kuhlukumeze ngendlela engingenakuyichaza ilungelo lami lokuqulwa kwecala ngokushesha. Ukudonda kokuthethwa kwaleli cala kugxile ekungahambisini ngendlela amalungiselelo okuthethwa kwalo. Ukudonsa kwaleli cala kuhlukumeze ilungelo lami lokuba msulwa. Kuzobekwa, njengoba ubufakazi bucacisa kulo daba, ukuthi ukudonsa kwesikhathi icala lingathethwa kulimaze ngokungesenakulungiseka ukukwazi kwami nokofakazi ukukhumbula konke okumayelana nalolu daba, ngakho-ke ukwethembeka nesigqi sobufakazi sekulimele ngendlela engasenakulungiseka. Izizathu zokubambezeleka, namacala engibekwa wona, ukungathembeki kweNPA ekusingatheni ngokwethembeka leli cala akusenakulungiswa muntu.
Okwesihlanu, ngizosebenzisa amatape ezobunhloli nezitatimende ezifungelwe ezikhomba inhlese yezepolitiki kulawa macala engibekwe wona. Ukungenelela kwezikhulu zikaHulumeni njengoba kucacisa amatape ezobunhloli kukhombisa ngokusobala ukusetshenziswa kweNPA wuNgcuka noMarcarthy, yize esehambile kuNPA, nokuthi uMarcarthy wazama kanjani ukuqondanisa ngokwesikhathi ukushushiswa kwami nombango wezikhundla eqenjini elibusayo, kulokhu i-ANC. Kulokhu ngizokhombisa ngokusobala ukuthi kwakungenasikhalo sobugwegwe, noma-ke idokodo elalibhekiswe kimi ngoba isizathu sokungishushisa ngempela kwakuyindlela yokungigudluza embangweni wesikhundla esingesikhulu ku-ANC nasezweni ngokusebenzisa budedengu izinhlaka ezilawula ubugebengu, kulokhu amaScorpions okwakufanele angesabise. INPA encwadini yayo yosuku lwama-25 kuMandulo wezi-2018, yabeka ngale ndlela elandelayo:-
“Okuyisiphetho salolu daba wukuthi akunadokodo njengokwesijwayezi kuSAPS mayelana nokushushiswa kwalowo wena ongummeli wakhe kanye neThales. Okukhona yimiqulu engamaphepha eqoqwe yithimba leDSO, njengamanje ekusiqukathi somkhumbi ongaphansi kwehlo likaMnu uJohan du Plooy (manje osenguKhenela kuSAPS, owabuyiselwa ophenyweni ngoMfumfu wezi-2017), kanye nolwazi oluningi oluqukethwe kwezokuxhumana oluqoqwe ngabantu ababalulwe ku-11 ngenhla ngesikhathi besebenza lolu daba.
Akubona bonke laba bantu abakwaze ukugcina lonke lolu lwazi selokhu uMnu uMpshe anquma ukuthi udaba lungabe lusaqhubeka.”
(Incwadi yeNPA ebalulwe ngenhla iyocutshungulwa kanzulu kulesi sitatimende esifungelwe uma sengichaza kabanzi ngokungenzekanga ngendlela kusalungiselelwa ukuthethwa kwecala nangesikhathi sengichaza ngamacala engethweswe wona.)
Ozul azayithole Oct 9, 2020